मिडिया एनपी – MediaNP
काठमाडौँ । उपवास बस्दा धेरै मानिसहरु फलफुल खाएर बस्छन् भने कतिपय व्यक्तिले त पानी समेत नखाइ उपवास बस्ने गर्छन् । तर अमेरिकाका एक व्यक्तिले भने डेढ महिनासम्म बियर मात्रै खाएर उपवास बसेका छन् । बाध्यताले
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: , ०, ०१२:११0
काठमाडौँ । नेपाली चलिचित्र होस्टेलबाट उदाएकी नायिका स्वतिमा खड्का निकै चर्चामा रहेकी छन् । पछिल्लो समय चलिचित्र बुलबुलमा गरेको अभिनयको कारण उनीले थप चर्चा पाएकी छन् । स्वस्तिमालाई पछिल्लो समय नेपालकी चर्चित नायिकाको उपमा दिइएको
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: , ०, ०१२:०३0
काठमाडौँ । हाम्रो गाउँघरमा पाइने स्वादिष्ट तरकारी मध्येको एका हो तामा । विभिन्न सामाग्री तयार पार्नको लागि प्रयोग गरिने बाँसको तामालाई तरकारीको रुपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । तामाबाट निकै स्वादिलो अमिलो अचार पनि बन्छ
जानिराख्नुहोस् ! यस्तो समस्याको कारण लाग्नसक्छ आँखासम्बन्धी गम्भिर रोग ! जानकारीको लागि सेयर गर्नुहोला
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: , ०, ०१०:५४0
काठमाडौँ । गर्मीयामको सुरु भएसँगै थकान, अनिन्द्रा, प्रदुषण तनाव, जस्ता विभिन्न प्रकारका समस्याको कारण आँखामा कालो धब्बा बस्ने गर्छ । पछिल्लो समय अत्याधिक स्मार्ट फोन प्रयोग गर्ने भएको कारण पनि आँखामा विभिन्न समस्याहरु देखिने गर्छ
विश्वकै डरलाग्दा कमिलाहरु ! जो पुल बनाएर खोला तर्नेदेखि सिंगो गैँडा समेत खाएर सकाउँछन् !
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: , ०, ००९:४०0
काठमाडौँ । देख्दा सानो भएपनि निकै बलवान रहेको कमिला पुल बनाएर खोल पनि तर्न सक्ने जीव हो । एउटा मरेको सिंगो गैडालाई तीन दिन मै खाएर सक्ने कमिला निकै अचम्मको हुन्छ । सुन्दा अपत्यारिलो लाग्ने
सावधान ! शरिरका यी ४ अंग भुलेर पनि नछुनुहोस् ! नत्र आइपर्छ जटिल समस्या
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: , ०, ००८:५४0
काठमाडौँ । शरिरका संवेदनशिल मानिएका अंगहरु नाक, कान, आँखा जस्ता अंगहरुको विशेष तरिकाले स्याहार गर्नुपर्छ । यी अंगलाई पटक पटक छुने गर्दा विभिन्न किसिमको संक्रमणहरु शरिरको अन्य अंगमा सर्ने भएकाले यसको बारेमा सजग रहन जरुरी
यस्तो देखिए अमिताभ बच्चन फिल्ममा ‘चेहरे’
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: , ०, ००८:३५0
काठमाडौँ । बलिउडका महानायक अमिताभ बच्चन हाल ‘चेहरे’को छायांकनमा व्यस्त रहेका छन् । भर्सटायल अभिनेताको रुपमा पनि चिनिने बच्चन पछिल्लो समय आफुले अभिनय गर्ने फिल्मको लुक्समा निकै ध्यान दिने गर्दछन । छायांकनमै रहेको फिल्म
वर्षौदेखि पानीमा तैरिरहेको बस्तीका मानिसहरु यसरी गर्छन् जीवनयापन
काठमाडौँ । छिमेकी राष्ट्र चीनमा एक समुदायका मानिसहरुले हरेक समय पानीमा बिताउँदै आएका छन् । सुन्दै अनौठो लाग्ने ती मानिसहरुको समुन्द्रम ढुंगा बनाएर बस्ती नै निर्माण गर्ने एक परम्परा रहेको छ । लामो समयदेखि यसरी समुन्द्रको
काठमाडौंमा चीनले रेल गुडाइदिने, २ बर्ष भित्र बनिसक्ने (भिडियो)
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: , ०, ००७:५८0
काठमाडौंः चिनियाँ कम्पनीले काठमाडौं उपत्यकामा स्काई रेल चलाउने प्रस्ताव गरेको छ । बेइजिङ चाइना एयर रेल ग्रुप (सिसिएआर)ले लगानी बोर्डको अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सम्बोधन गरेर लेखिएको पत्रमा स्काई रेल चलाउन प्रस्ताव गरेको हो । सिसिएआरले
घरमा यी जनावरको मूर्ति राख्नुहोस् ! पाउनुहुनेछ जीन्दगीभरी सुख र शान्ति !
काठमाडौँ । हिन्दु धर्ममा विश्वास गर्ने हरेक व्यक्तिको घरमा विभिन्न किसिमका भगवान र जनावरहरुको मूर्ति राखिएको हुन्छ । वास्तुशास्त्र अनुसार घरमा जनावरहरुको मूर्ति राख्दा हरेक किसिमका लाभ हुने विश्वास रहेको कारण मूर्तिहरु राख्ने परम्परा रहेको